Icehotel na Sweden: to ga-ahụ ụlọ ọrụ ọhụụ ọhụụ abụọ!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Sweden » Icehotel na Sweden: to ga-ahụ ụlọ ọrụ ọhụụ ọhụụ abụọ!
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Abụọ ọhụụ ụlọ ọrụ ọhụụ mepere na ICEHOTEL na Jukkasjärvi. Oge ọkọchị na-acha akwụkwọ ndụ na Sweden, mana n’ime ọ bụ n’oge oyi. Ma ọ dịkarịa ala na ICEHOTEL na Jukkasjärvi na ebe ọ bụ na Disemba 2016 nwere akụkụ na-adịgide adịgide nke ice na snow, nke na-emeghe kwa afọ ma na-agba ọsọ na ike anyanwụ.
Akụkụ na-adịgide adịgide nke Icehotel jupụtara na nka emere site na kristal Arctic kristal doro anya, ọdịiche megide ahịhịa ahịhịa dị n'èzí. Lọ nkwari akụ ahụ nwere ebe a na-eme ice, ebe a na-egwu mmiri na ebe a na-akpụrụ mmiri iri abụọ, itoolu n'ime ha nwere sawụna nkeonwe ma zuru ike, nke ndị omenkà si n'akụkụ ụwa niile mepụtara ma wee aka.
A na-ewepụta ụlọ ọrụ ọhụụ ọhụrụ ọhụụ ọhụrụ n'akụkụ afọ nke ICEHOTEL. Otu n'ime ime ụlọ ọhụrụ bụ Deluxe Suite nke nwere sawụna nkeonwe yana ụlọ ezumike dị jụụ. A na-akpọ ụlọ ahụ "Lost & Found" na imewe na ụlọ ahụ na-esonyere ya na egwu ederede pụrụ iche na ụda nke onye na-ede uri na onye na-egwu egwu Petri "Bette" Tuominen.
Ebe a bụ ebe ndị ọbịa na-eme njem dị n'ime yana ngwakọta nke ice, ụda, na ọkụ. E wezụga ihe ndina, ọmarịcha ụlọ ahụ nwere oche ebe ndị ọbịa nwere ike ịnọdụ ala, lekwasị anya n'ihe ọkpụkpụ wee bido njem ha.
- A na-eduzi onye ọbịa ahụ n’ime ụwa nke aka ha site n’enyemaka site na ụda, egwu, na olu. Ime ụlọ, ice, na imewe bụ ọkara ahụmịhe, ebe ọkara nke ọzọ bụ ụda na ọkụ na-emekọrịta ma were onye ọbịa ahụ n'onwe ha, njem onye ọ bụla, ka Jens Thoms Ivarsson na-ekwu.
Jens Thoms Ivarsson na-arụ ọrụ na nka nka ihe karịrị afọ 15 ma bụrụbu onye isi okike Creative na ICEHOTEL. Oge a bụ oge ịnwale ihe ọhụrụ - ijikọta egwu, olu, ụda, na imewe.
- Ọ bụ ihe ịma aka ịnweta ụda, ọkụ, na imewe iji mekọrịta, mana anyị nwere obi uto na nsonaazụ ahụ. Ọ ga-atọ anyị ụtọ ịnụ ihe ndị ọbịa ahụ chere.
Ebube ndị dị ebube
Onye na-ese ihe na onye mmebe bụ Javier Opazo si na Chile kere ụlọ ọrụ nka ndị ọzọ. A na-akpọ ụlọ ahụ "Téckara", nke pụtara nọmba itoolu na Kunza (asụsụ a na-asụ na Andes). Thelọ ahụ nwere aha ya n'ihi na ọ nwere ogidi itoolu na-egosi ogo ụlọ dị elu.- Echere m na ndị ọbịa ahụ ga-enwe mmetụta nke nnukwu ogidi ndị na-agbatị ruo n'uko. Ọ bụ mmetụta dị ebube na elu ụlọ nke mita 4,7, ka Javier Opazo na-ekwu.
New ọkpụkpụ ngosi
E mekwara ihe ngosi nka na ihe osise itoolu ọzọ nke ice na snow na ngwụsị izu na akụkụ nke Icehotel. Emepụtara ihe ngosi ahụ n’oge ọgbakọ mkparịta ụka ice yana ndị omenkà akpọrọ fromtù Na-ahụ Maka Ọkpụkpụ nke Sweden, nke onye ọhụụ na onye ọkpụ ihe aha ya bụ Lena Kriström duziri, onye nwere afọ iri abụọ na ise nke ịkpụ akpụ.
- Obi dị anyị ụtọ igosipụta ụlọ ọrụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ nwere nkwupụta, mmetụta na imewe ọhụụ, dịka ịmepe ihe ngosi ọhụụ ọhụụ na-elekwasị anya na ihe osise na ihe osise na ihe osise. Ọ na-egosi obosara site na imepụta na nka nke ICEHOTEL na-enye ndị ọbịa, ka Onye Ọkachamara Ndụmọdụ na ICEHOTEL Arne Bergh na-ekwu.
ICEHOTEL mepere na 1989 ma n'akụkụ ụlọ nkwari akụ bụkwa ihe ngosi nka na nka na-agbanwe mgbe niile site na ice na snow. ICEHOTEL ka emepụtara n’oge ọhụụ n’oge oyi ọ bụla, nke emere site na ice kpụrụ mmiri site na Osimiri Torne, otu n’ime osimiri ndị Sweden ma nwee mmiri na-akpaghị aka. Mgbe oge oyi nke Icehotel agbazela n’ime osimiri n’oge opupu ihe ubi, otu akụkụ nke ụlọ oriri na nkwari akụ ahụ ka dị; ebe ndi ọbịa nwere ike ihu ice na snow n’afọ niile.